राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलित « News24 : Premium News Channel
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलित
दाङ । भदौ १३ राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रादेशिक अस्पतालसहित तुलसीपुरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्क तथा स्वास्थ्यकर्मीले आइतबार विरोध गर्दै सडकमा निस्केका हुन् ।
अस्पतालका डाक्टरमाथि दुर्व्यवहार भएपछि उक्त घटनाका दोषीलाई कार्बाहीको मागसहित उनीहरूले बजार परिक्रमा गरेका हुन् ।
घटना भएको तेस्रो दिनसम्म पनि घटनामा संलग्न दोषी पक्राउ पर्न नसकेको भन्दै उनीहरु आक्रोसित बनेका छन् । दोषी पक्राउ नपर्दासम्म अस्पतालका आकस्मिक, डायलायसिस र सुत्केरी सेवाबाहेक अरु सेवा बन्द गरिएको संघर्ष समितिका सम्योजक डा ॐ अर्यालले बताए । उनले दोषी्लाई कारवाही नभएको हुँदा आन्दोलन सडकमा केन्द्रीकृत गरेको बताए ।
चिकित्सकको आन्दोलनका कारण सेवा अवरुद्ध हुँदा अस्पतालमा आउने बिरामीले सास्ती पाएका छन् । अस्पतालमा अन्य सेवा बन्द गरेर उनीहरु आन्दोलनमा हुँदा उपचारका लागि अस्पतालमा आएका बिरामीहरु त्यसै फर्किन बाध्य भएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेले घटनामा संलग्न दोषी उम्कन नसक्ने बताए ।
शुक्रबार दिउँसो २ बजेतिर सर्जन परियार, दिवस क्षेत्री, गणेश खड्कासहितका युवाहरूले डा. सिंहमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए । अस्पतालमा कल्चर सेवा नभएको विषयमा विवाद भएपछि परियारसहितको टोलीले डा. सिंहलाई मोसो दलेपछि अहिले अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले सेवा नरोक्न आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरेका छ्न ।